Naqshadda Qaybta Xasaasiga ah Naqshadaynta Xaaladda AHU: Guud ahaan 61 nooc oo Naqshadeynta Qaybta Heerka ah ee Xaaladda AHU, waxay u dhigantaa baahi mug mug leh oo hawo ah. Dhanka kale, si loo waafajiyo saamiga mugga hawada kala duwan ee u dhexeeya hawo bixinta & hawada qiiqa dalabyada dalabyada kala duwan, Holtop wuxuu sameeyaa naqshad Qaybta Qaabdhismeedka oo dheeri ah si waafaqsan, si loo damaanad qaado waxqabadka AHU, isla markaana u ka dhigto xajmiga AHU isla markaa, si loo badbaadiyo kharashka & booska qolka mashiinka.
Waxqabadka sare qaboojinta / kululeeyaha biyaha: Qalabka biyaha ee Holtop ayaa si madaxbanaan loo baaray oo la soo saaray, kuwaas oo ka samaysan tuubooyin naxaas ah oo tayo sare leh baalal aluminium, iyada oo loo marayo tiknoolajiyad ballaadhan oo ballaadhinaysa isugeyn dhammaystiran, oo leh waxqabadka kuleylka wareejinta heer sare. Gariiradda ka dib, PVC ama biraha birta ka saaraya ee birta ah ayaa la rakibi karaa. Iyo saxaarad kondensate ah ayaa lagu rakibi karaa si loo hubiyo in si qumman looga saaro dheecaanka.
Isku-darka miirayaasha badan: Qeybta taxanaha HJK-E waxay bixisaa iskudhaf miirayaal iyo miirayaal qeexitaano kaladuwan si loo buuxiyo baahiyaha isticmaalaha hawo nadiif ah oo kaladuwan. Miirayaasha cufan ayaa buuxin kara shuruudaha guud ee nidaamka hawo qaadashada, miirayaasha dhexdhexaadka ah ayaa la kulmi kara shuruudaha nadiifinta guud ee hawo-qaadashada. Miirayaasha PM2.5 ee gaarka ahi waa ikhtiyaari, hawada cagaaran hadda kama sii fogaan karto. Intaa waxaa dheer, miirayaal qaas ah oo loogu talagalay nadiifinta elektarooniga ah iyo codsiyada kale ayaa sidoo kale la heli karaa.
Dayactir badan oo dheeri ah unit Qaybta waxay isticmaashaa qaybo badan oo istaandar ah, oo si sahal ah u noqon kara Qeybta waxaa loogu talagalay albaabbo laga soo galo oo lagama maarmaan ah waxaana lagu qalabeyn karaa daaqadaha wax lagu fiirsado iyo nalalka cadeynaya huurka si loo fududeeyo dayactirka. Guddi cutub ayaa laga saari karaa banaanka, way fududahay in la kala furfuro. Guddiyada waxaa lagu sharaxay daboollo qurxin leh, daloolka ciddiyaha wax saameyn ah kuma yeelan doono muuqaalka cutubka.